Inkxaso yobugcisa - Lanlin Printech
Azinikezele ukuba uphendula imfuneko abathengi 'nanini na, naphi na, ungasoloko uqhagamshelane nathi lula yakho ngefoni, Email, Skype okanye nayiphi na enye indlela.
weenjineli zethu ingcali zobugcisa bangathanda ukunika inkonzo ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka. Nakuba kunjalo, ukwenzela ukubonelela ngcono inkonzo yakho uze ufumane ngxaki ingasombululwa, nceda usithumelele imeyili ukuze achaze ulwazi ngokupheleleyo umshicileli Jonga & Inkcukacha nepleyiti, imifanekiso, kunye impazamo.
Shenzhen Lanlin Printech Co., iisayithi Ltd 's uqeqesho ibekwe eTshayina, uze Ukubonelela ngokwazi ukufikelela kuzo zonke zabashicileli. Abaqeqeshwa bayakwazi ukufumana izandla-ngamava nomshicileli, ukufunda ulondolozo esisiseko kunye nokusebenza ngendlela elawulekayo kubume bayo.
Ukuba unako ukusinceda ukufumana ivisa kunye nabo bangathanda ukuba bathwale iindleko ezifana amatikiti moya, indawo yokuhlala yasekuhlaleni, njl, sinako ukuthumela ezintanjeni zethu kwi-ofisi yakho, ukuba ndininike ekufakeni kunye noqeqesho nje njengokuba uyazi ukuba usebenza njani.
Ukuba abanelisekanga ziinkonzo ezinikezelwa abasasazi zasekuhlaleni, nceda uqhagamshelane nathi.